थाहा खबर: हिन्दु धर्मको विषयमा जनमत संग्रह हुनुपर्छः युवा संघ अध्यक्ष राजीव पहारी
'संघीयताले मुलुकको विकास गर्नुपर्छ'
खासगरी बामपन्थी आन्दोलनमा तन्त्र, वाद र सिद्धान्तमा अल्झने खालको स्वभाव छ, त्यसलाई म पनि स्वीकार्छु। हामी मिल्दाखेरी देवत्वकरण गर्ने र अलिकति नमिल्दा बित्तिकै आत्मभ्रष्टिकरण गर्ने कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा महारोग हो। दुखद कुरा पछिल्लो पटक त भौतिक आक्रमणको स्थिति पनि भयो। दुखको कुरा नेपालमा वामपन्थी शक्ति एक ठाउँ उभिन नसक्ने र पूँजिवादीहरुले आवश्यकता अनुसार यूज एन्ड थ्रो गर्ने ट्रेन्ड देखिँदै आएको छ। हामी त्यसको शिकार भएका छौं। कुनैपनि विचार सिद्धान्त र पार्टीको जन्म त मान्छेको जीवन समृद्ध बनाउन, उन्नत बनाउनका लागि हो नि, त्यसका लागि काम नगरे त त्यस्तो पार्टी र विचार डाइनोसर झैँ लोप हुन्छ। कहिलेकाहीँ म सोच्छु, आइडोलोजीले मात्रै विकास हुन्छ भन्ने लाग्दैन, भुटानमा राजतन्त्र भएर पनि विकास गरेको छ, भारत पूँजिवादी भएर पनि विकास गरेको छ, चीन सोसलिस्ट मुलुक भएर पनि विकास गरेको छ। भारतको बिहारमा नीतिश कुमारको पार्टीको के विचार छ? तर विकास त गरेकै छ। काम त गरेकै छ नि। त्यसैले अब काम गर्नुपर्छ।
तपाईँहरु जुन आन्दोलनमा हुनुहुन्छ, जे आन्दोलन गरिरहेका छौं भनेर भनिरहनुभएको छ भोलि यसको लेनदेन सत्तासँग हुन्न?
हतारमा ७ प्रदेशको विभाजन गर्‍यौँ। नेपालजस्तो सानो मुलुकमा ७ प्रदेश नि धेरै हो कि ! हिमाल पहाड तराई मिलाएर बनेका त्यही विकास क्षेत्रलाई ५ वटा प्रदेश बनाएर संघीय संरचनामा गएको भए राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने मलाई लाग्छ
सुन्नुस् अन्तर्वार्ताको अडियोः